Makomisheni Owirirana Kushanda Pamwe Chete Munyaya dzeKodzero
Makomisheni emunyika anoona sezvakafanira kushanda pamwe chete kuchengetedza kodzero dzevanhu.
Makomisheni akasiyana siyana munyika anobvuma kuti zvakakosha kuti ashande pamwe chete munyaya dzekusimudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa muBulawayo pakati pesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum nemakomishini akasiyana-siyana emunyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ega wekupanana ruzivo pamwe nekuzeya nzira dzekushanda pamwe chete.
Vachipa muenzaniso weZimbabwe Electoral Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission, Muzvare Patience Chiradza, vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanirwa kuona kuti sarudzo dzaitwa zvakanaka murunyaro, ukuwo NPRC ichiona kuti munyika mune runyararo.
Vati nekudaro zvakakosha kuti makomishini aya ashande pamwe chete mumabasa ekudzivirira zvose zvingakanganisa runyararo munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Muzvare Blessing Gorejena, vati vaona zvakakosha kuita musangano uyu nekuti kunyange hazvo makomishini akasiyana-siyana ane chinangwa chekusimudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu, haawanze kushanda pamwe chete nekuda kwekuti haawane mukana wekupana ruzivo pamabasa aanoita.
Vati sezvo nyika yakatarisana nesarudzo zvakakosha kuti makomisheni aya pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ega, ashande pamwe chete.
Vamwe vanhu vapinda mumusangano uyu vabvumawo kuti zvakakosha kuti makomishini pamwe nemasangano akazvimirira ega aite mushandira pamwe pakusimudzira kodzero dzevanhu.
Mumwe wevanhu ava uyo angozvidoma nezita rekuti Miriam ati kuruzhinji pane maonero ekuti pane kupindira kweve zvematongerwo enyika mune mamwe makomishini uye haazi kuita mabasa awo nenzira inotarisirwa, akatiwo misangano yakadai inogona kubatsira kugadzirisa nyaya iyi.
Musangano uyu wapindwa navamwe vakuru vakuru vemakomishini aya pamwe nenhego dzemasangano akasiyana-siyana anoshanda akazvimirira oga munyaya dzekodzero dzevanhu.
Munyika mune makomishini anoti ZEC, NPRC, Zimbabwe Media Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Gender Commission neJudicial Services Commission.